Apple inotangisa chidzidzo kuti uone COVID-19 neApple Watch | IPhone nhau
Isu tave tichirwara nedenda re COVID-119 kweinopfuura gore uye zvinoita sekunge harizomboperi ... Matambudziko nemajekiseni, matambudziko nemitemo yekuchengetedza, nhau dzisingaperi dzisingatipi zororo pamberi pechirwere ichi icho zvakaoma kwazvo kwatiri kukanganisa. Asi takatarisana nenhau dzakaipa kudaro, tinogara tine tariro isinganzwisisike. Nhasi Apple ichangobva kuburitsa chidzidzo chitsva umo ichashandisa iyo Apple Watch kuti itange nekukurumidza hutachiona hunogona kuitika hwe COVID-19. Ramba uchiverenga kuti tinokupa zvese zvakadzama nezve chidzidzo chitsva ichi neApple chekutsvaga COVID-19.
Sezvatinokuudza, Apple yanga ichida kutanga chidzidzo chitsva (Kufarira kwekambani kushandisa Apple Watch kuona matambudziko ehutano kwatozivikanwa) nako tsvaga zvirwere zvekufema, zvinosanganisira COVID-19 kana dzihwa, chidzidzo chinofanira kuitwa muUnited States pamwe nekubatana ne Yunivhesiti yeWashington uye iyo Seattle Flu Study, uye izvozvo zvinogara kwemwedzi mitanhatu. Kuburikidza neMayunivhesiti uye neApple Research application, iko kufona kuchavhurwa kune vashandisi kuti vashandise. Kana vari vakasarudzwa vanozopihwa neApple Watch iyo inounganidza data pahutano hwavo uye zviitiko. Vachafanirwa kupedzisa ongororo (vhiki nevhiki uye pamwedzi) kuburikidza neApple Research pa iPhone yavo nezvezviratidzo zvekufema nemararamiro avo.
Kana mushandisi akabatwa hutachiona panguva yechidzidzo, bvunzo yePCR yemahara ichapihwa. kusiyanisa iyo data inogadzirwa kuburikidza neApple Watch. Uye ndeyekuti maApple ekupedzisira eApple sensors anogona kutitaurira zvakawanda nezve zvatiri. A Gomo reSinai rakawana kuti iyo Apple Watch inokwanisa kufanofungidzira kuongororwa kwakanaka kwe COVID-19 kusvika vhiki pasati pabvunzo dzePCR. Uye newe, Iwe unogona kutora chikamu mumuedzo wakafanana muEurope?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inotangisa kudzidza kuona COVID-19 neApple Watch
Podcast 12x26: Zvese zvatinoziva nezve inotevera chiitiko pa20